Gụnyere Factory | N'ogbe Plus Size Manufacturers, Suppliers
Factory Direct Women O olu Mesh Splicing Maxi nke onwunwu Plus Size Sequin Dresses
Nke a mara mma ntupu kpachie sequin uwe bụ ejiji na sexy, na-eme ka a ọzọ oge ọzọ dazzling. Ejiri uwe mgbede mara mma nke etiti oge a jiri akwa na ntupu. Ọ bụ ezigbo ejiji na-atụgharị maka abalị gị.
Nnukwu Ogologo agba agba agba agba agba mara mma nke atọ ụzọ anọ Sleeves Casual Plus Size Women Women Maxi Dresses
Uwe a mara mma nke ụmụ nwanyị mara mma O-neck 3/4 sleeve banquet banquet blimet-skillet fit-ogologo uwe ka nke chiffon na lace akwa, ọkụ na nro. Kwesịrị ekwesị maka oriri, oriri ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ.
Emebere na China nke di iche na agba nke ndi nwanyi mara mma
Uwe a mara mma na nke chiffon mara mma na-egosipụta uwe aka dị mkpụmkpụ na agba nwere mgbochi na-acha ọcha, nke na-agbakwụnye ọhụụ dị egwu ma dị jụụ ma dịkwa mma. Uwe ejiji akwa na-egosipụta ụdị mgbede mara mma nke pụrụ iche. Kwesịrị ekwesị maka oriri, oriri ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ.
China Factory Ladies ikpere Ogologo Maxi Chiffon Plus Size Bodycon Dress N'ihi Summer
Nke a chiffon smock Maxi suspender uwe, nke onwunwu suspender sket na ìhè chiffon uwe elu, ala, breathable, sexy na maa mma. Uwe mgbede a dị mma maka mmemme kwa ụbọchị, nnọkọ mgbede na klọb.
Womenmụ nwanyị siri ike Sexy Size S-5XL Plus Size Slit Na Back Bottom Bodycon Off Jirinụ Chiffon Uwe N'ihi Summer
Zọ ubube ga-eme ka ị nwee mmekọahụ na ịma mma.
Nhazi nke aru nwere ike igosi onu ogugu gi.
Kwesịrị ekwesị maka oriri mgbede, oriri, klọb, wdg.
DR80041 OEM plus size o neck Elastic n'úkwù nkịtị maxi satin ogologo aka mara ifuru bodycon bandeeji uwe forspring mgbụsị akwụkwọ
Uwe ifuru a buru ibu na-eji ogologo oge mara ezigbo mma, dị mma maka atụmatụ brunch izu ụka ahụ. Nnukwu akụkụ nke usoro ifuru, amara amara, mee ka ọnọdụ gị dịkwuo mma. Uwe a na-amasị anyị nke ukwuu, na-akwa akwa ikiri ụkwụ na otu ọla ntị ahaziri iche.
Key Atụmatụ Gụnye ：
Terndị :dị: Ifuru
:Dị: A Line
Ogologo Aka: Long Sleeve / Sleeveless
Uwe aka: Regachi
Uwe n'úkwù: Akwa n'úkwù
Oge: Oge opupu ihe ubi / Fall / Summer
Ricdị ricdị: Satin
DR870003 Oversized ladies V-olu akwa dị elu nwere eriri akwa
Mara oke chiffon tinyere oke sexy uwe ejiji, oke ọkụ. V-olu sexy na maa mma tailoring bụ nnọọ ìhè, Flounced aka uwe, rụrụ ikiaka nnwere onwe nke ije, zuru okè mkpuchi ogwe aka, elu n'úkwù eriri, comfortably fit the curve of the body, na-egosi nwanyị amara.
Ngwaahịa: gbakwunyere ogo sexy V-neck ogologo uwe ejiji ụmụ nwanyị / mmanya oriri na ọ partyụ partyụ ndị nwanyị na-eji ejiji / oge okpomọkụ dị mkpụmkpụ ogologo uwe / uwe agbamakwụkwọ mara mma ma mara mma / 2021 ejiji ejiji ọhụrụ / uwe dị larịị ruffled aka / Loose retro ogologo uwe / adabara ụmụ nwanyị / gbatịkwuru abalị na mmanya oriri na eriri
Kwesịrị ekwesị maka oge: kwesịrị ekwesị maka ụmụ nwanyị XL na ụmụ nwanyị, ọkachasị ụmụ nwanyị bust, kwesịrị ekwesị maka oge opupu ihe ubi, oge ọkọchị na mgbụsị akwụkwọ, kwesịrị ekwesị maka oriri mmanya, ndị agbamakwụkwọ, agbamakwụkwọ, ezumike, ezumike, ụlọ, ọrụ, ụbọchị, oriri, n'okporo ámá, ọpụpụ, ezumike, njem, N'èzí, oge ezighi ezi, ịzụ ahịa, ịgba egwu, egwuregwu, nzukọ, abalị apụ, ezumike azụmahịa, oge ezumike, usoro iwu kwadoro ma ọ bụ oge ndị ọzọ pụrụ iche.
Ọrụ ndị bụ isi gụnyere:
-V olu akwa
Aka uwe dị mkpirikpi
-Uwe nwere ogologo oge
- Akwa ukwu, eriri na-agbanwe
-Soft, ume, tinye nha
PY80118 summer fancy spaghetti long pant striped ụmụ nwanyị pajamas backless women's sleepwear mmekọahụ gbakwunyere size pajamas wholesale set
Were abalị na akwa uwe anyị na-ehi ụra
Ga-asị mba abalị ma ị hụ uwe ụra anyị kwesịrị ekwesị na akwa ime akwa anyị. Nwee obi ụtọ na nhazi pajama setịpụrụ, ịpụ na uwe abalị ma ọ bụ gaa maka ihi ụra na-ehi ụra na nkwupụta onesie. Nweta ụra mara mma gị na ntọala kacha mma sitere na boohoo.
Typedị :kpụrụ: Nkea
Aka Ogologo: Aka uwe
TPB86022 New style nightclub lace eriri siri ike agba akuku n'elu sexy tinyere oke elu
Iesmụ nwanyị nwere akwa sexy lace, olu ha n'egosiputa ihe mara mma na olu mara mma. Ihe nkpuchi lace dị n'ime obi na-enwe mmekọahụ mara mma, otu obere mkpirisi na-ekpughe ọnụ ọgụgụ gị. Uwe dị elu nwere ọtụtụ uru: nkasi obi, iku ume, ịmị ọkụ ọsụsọ, enweghị mbibi, enweghị nrụrụ. Adabara ọtụtụ oge, dị ka yoga, ịgba ọsọ, egwuregwu, ihe omume kwa ụbọchị.
- ricdị akwa: kpara
- Ihe: 100% polyester
- Olu akwa: gburugburu olu
- Style: nkịtị / sexy
- Aka ogologo: uwe elu
BL80125 New abịa fashionable sexy uwe elu nwanyị backless v olu ogologo uwe elu nwanyị
Nchịkọta Nkọwa ngwa ngwa Afọ Otu: Ndị okenye Gender: Productdị Womenmụ nwanyị Productdị: Ndị uwe ojii & N'elu Uwe Ogologo: Patdị Longdị Ogologo: Okpukpo siri ike: Mgbada Ogologo Uwe Ochie (cm): Dechọ Mma Kachasị: Button, Hlow Out 7 ụbọchị nlele iji oge: Nkwado Tụkwasịnụ Type: OEM ọrụ Ihe: 100% Polyester Fabric Type: Poplin Sleeve Style: Regular Top Type: Shirt / Blouse Technics: Plain Dyed Feature: Anti-pilling, Anti-Shrink, Anti-wr ...
DR86005 Factory Direct Sale Sexy Stripe tinyere akwa akwa S-3XL Jumpsuits Women Clothing
Isi Ndenye Nkọwa Ebe nke Si Malite: Anhui, China Brand Name: lisen Model Number: DR86005 Fabric Type: Woolen Feature: Breathable, Plus Size Tụkwasịnụ Type: Na-Stock Ihe Ihe: POLYESTER / NYLON ...
BL870002 Ọbịbịa Ọmụma Nwanyị Ọhụrụ Na-abawanye Nha 5XL Long Sleeve Front Button Polka Dot Blouse For Spring
Isi Nkọwa Nkọwa Otu Afọ: Okenye Nwoke: Productdị Womenmụ nwanyị Productdị: Blouses & N'elu Uwe Ogologo: Patdị Redị gulargha: :dị Ddị: DOT Collar: Mgbada Ogologo Uwe Ochie (cm): Mma Fullchọ Mma: ...